Ghostwriter Linguistics I Waxaan qornaa shaqadaada Warqadaha
Qorayaashayagu waxay leeyihiin khibrada lagama maarmaanka u ah cilmiga luqadaha
Barashada afafka iyo cilmiga afafku waa koorso la jeclaysto maxaa yeelay waxay furaysaa albaabbo badan oo kala duwan oo xagga xirfadda ah. Si kastaba ha noqotee, celcelis dhibco fiican oo ah imtixaannada dhexdhexaadka ah iyo qoraalka ugu dambeeya ayaa muhiim u ah si loo helo fursado wanaagsan suuqa shaqada. Si kastaba ha noqotee, imtixaanadu waxay noqon karaan kuwo walaac badan oo cabirkoodu aad u weyn yahay. Taasi waa sababta aan kuu caawinno. Aan qorno shaqadaada. Ka dalbo shaqadaada qoraaladeenna dhammaystiran maanta. Waxay ku garab taaganyihiin khibrad xirfadeed. Waan ognahay in ardaydu inta badan ku jiraan cadaadis waqti weyn oo ay la kulmaan tiro ku dhow hawlo aan la maarayn karin. Si loo awoodo in lagu guuleysto astaamaha ugu sarreeya, si kastaba ha noqotee, shaqo isdiyaarin oo joogto ah oo ballaaran ayaa lagama maarmaan ah. Tan si dhib yar ayaa looga gaari karaa nolol maalmeedka ardayda. Taasi waa sababta aan ugu faraxsanahay inaan ku caawinno oo aan ku garab joogno si aad ugu dhammaysato waxbarashadaada sida ugu wanaagsan ee ugu macquulsan. Samee codsigaaga adoo isticmaalaya foomka xiriirka waxaanan kuu soo diri doonaa dalab bilaash ah isla markiiba. Caqligu aad buu muhiim noogu yahay.
sidoo kale telefoon ahaan ama halkii E-Mail waad nala soo xiriiri kartaa wakhti kasta. Macluumaadkaaga dabcan si qarsoodi ah ayaynu ula dhaqmi doonnaa. Waxaan sidoo kale kaa caawin karnaa kan Shaqada farsamada I caawi. Anaga rufen Waad ku faraxsan tahay inaad si buuxda oo bilaash ah kula soo xiriirto oo aad bilowdo mashruucaaga. Shaqada tacliimeed, waa inaad kireysataa hay'addeena qorista qoraaga.
Daraasadda cilmiga luqadeed waxaa lagu gartaa kala duwanaanshaheeda. Haddii maadada lagu dayacay iskuulada oo bartayaasha la siiyo aragti qallalan, hadday tahayba, markaa afafku waa goob saynis ah oo xiiso leh oo xiiso leh. Barashada cilmiga luqadaha ayaa aad uga sii dheer naxwaha kaliya iyo isticmaalka miyir-qabka ee qoraallada caadiga ah. Adduunkeenna casriga ah, ee digitized ahaan gaar ahaan, aqoonyahannada afafku waxay la kulmaan caqabado gebi ahaanba cusub. Luuqadaha kuma salaysna hal luuqad oo keliya, laakiin kuwani waa isbarbar dhigaan midba midka kale oo waxyaabaha caadiga ah ayaa laga shaqeeyaa si faham buuxa oo luqadeed loo abuuro.
Koorsada waxaa ku jira qaybaha hoose ee Bachelor, Master iyo Diploma:
Sayniska cilmiga luqaddu wuxuu ka hadlayaa kobcinta luqadaha iyada oo loo marayo cilmiga luqadaha iyo sida loogu adeegsado xaaladaha kala duwan. Imtixaanka aqooneed ee saameynta kala duwan ee luqadda ayaa si siman loo dhiirrigeliyaa oo loo babac dhigaa.
Cilmiga cilmiga luqadaha ee loo yaqaan 'Diachronic linguistics' wuxuu tixgelinayaa soo bixitaanka luqado kala duwan oo shaqsiyadeed oo asal ahaan ka soo jeeda iyo sida kuwan ay isugu xidhan yihiin. Waxay ku saabsan tahay heerarka luqadeed ee soo galaya iyo luqadaha ay xitaa dadweynuhu hoos u dhigeen iyo sababta. Marka lagu daro tixgalintaan taariikhiga ah, luuqadaha waxay leeyihiin meelo kale oo aad u xiiso badan oo keyd ah: luuqadaha cilmi baarista waxay kuwada shaqeeyaan gacanta dambiyada. Ma ogeyd in dembiilayaasha horey loogu xukumi karo iyadoo lagu saleynayo adeegsiga luqad gaar ah?
Luuqadaha waxay kuu furaysaa fursado badan noloshaada dambe ee xirfadeed. Haddii aad jeceshahay aaggaaga, waxba kama hor istaagayaan shahaadada kale ee waxbarasho. Dhammeystir shahaadadaada, hel shahaadada dhakhtarnimada oo ku samee cilmi baaris ku saabsan mawduucyada xiisaha leh iyo kuwa hadda jira. Taasi ma kugu qallalan tahay? Dhib malahan. Luuqad ahaan ahaan, waxaad sidoo kale raadin kartaa howlo kaladuwan oo ballaaran:
Tifatire ahaan iyo akhriste ahaan, u sax kuwa ugu wanaagsan berito,
qor tafatire ahaan joornaalada iyo wargeysyada runti waa weyn,
ma tarjumaysaa ama tarjumaysaa,
isku mashquuli sidii sarkaal saxaafadeed ama xoog hoggaamineed oo ka socda hay'adaha dhaqanka, ama
ku shaqee qaab dhismeedka horumarinta softiweerka ee ciyaaraha iyo xalka barnaamijyada berri.
Adiga oo haysta shahaadada cilmiga luqadda, waxaad leedahay waxbarasho aad u tiro badan waxaadna kala dooran kartaa noocyo badan oo firfircoon oo firfircoon. Qorayaashayada ruug-caddaaga ah ee aqoonta luqadeed waxay leeyihiin aqoon tacliimeed adag oo ku saabsan cilmiga luqadaha waxayna ku caddeeyeen shahaadadooda aqooneed iyada oo loo marayo shahaadada mastarka, shahaadada dibloomada ama shahaadada. Qorayaashayagu waxay qoraan shaqo. Khubaradeennu kuma fiicna oo keliya mawduucooda, waxay kaloo aqoon u leeyihiin qorista waraaqaha sayniska, si aanad wax khalad ah uga gelin qaabaynta ama heerarka sayniska. Aqoontaan, waxaad si karti leh ugu taageeri kartaa ardayda shahaadada bachelor-ka ama shaqada kale ee sayniska. Qorayaashayagu waxay ku jiraan sheyga waxayna si wanaagsan ugu tababaran yihiin mowduucyada hadda jira. Qorayaashu waxay leeyihiin khibrad sannado badan ah waxayna kugu taageeri karaan aqoontooda. Sababtoo ah habka joogtada ah iyo habka xirfadeed ee shaqada, abuurista shaqadaada waqti gaaban sidoo kale dhib malahan. Waa inaad ka faa'iideysataa tan oo aan qornaa shaqadaada. La xiriir Si fudud noo soo dir an Mail oder phone. Waan duubi doonnaa hawshaada isla markaana waan ku siin doonnaa isla markiiba dalab by. Hadda nala soo xiriir oo dalbo taada shahaadada Masterka oder Maqalka. Waxaad sidoo kale na siin kartaa mid dib u xusuusasho si loo hagaajiyo Kadib waxaan kuu soo wici doonnaa waqti adiga kugu habboon. Qorayaasheennu waxay ka caawin doonaan abuurista iyo su'aalaha. Qorayaasheennu waxay ku faraxsan yihiin inay qoraan shaqadaada cilmiyeed. Si aad u hesho darajo wanaagsan, waa inaad caawimaad raadsataa. Sababtoo ah hawlo badan oo hordhac ah waa in la qabtaa si loo soo gudbiyo shaqo cilmiyaysan oo wanaagsan. Waa inaad si joogto ah uga shaqeysaa iyada oo aan lagaa dhex gelin, haddii kale waxaad si dhakhso leh uga bixi doontaa mawduuca. Ka tag cilmigaaga Shaqada guriga qor.
unsere Qorayaashu waxay leeyihiin waayo-aragnimo sannado badan ah oo ku saabsan aaggooda cilmi-baarista oo aad haysato shahaado maadadaada ah. Kama baran kartid aqoontaan dhowr toddobaad inta lagu guda jiro waxbarashadaada. Der Bachelor iyo Maqalka waxaa lagu gaari karaa oo kaliya dadaal badan. Laga soo bilaabo barta aad ka qalin jabisay, waxaa jira fursado badan sida aad ku sameyso sayniska tacliinta, tusaale ahaan sii wad inaad xirfad yeelato awooddo.
Guud ahaan, waa inaad u isticmaashaa qaabeynta nadiifinta shaqadaada. Fiiro gaar ah u lahaanshaha saxda ah ee nuxurka iyo aasaas ahaan higgaadinta, naxwaha iyo calaamadaha xarakaynta. Hordhaca iyo gunaanadka shaqadaada sidoo kale waa mid aad muhiim u ah, maadaama barafasooryadu inta badan akhriyaan mowduucyadan bilowga. Qorayaasha guuleysta waxay qoraan hordhaca kaliya markay dhammeeyaan qeybta fikradda oo ay dejiyaan dhibaatada iyo ujeeddada shaqada. Hordhaca shaqadu waa inuu si fiican u akhriyaa. Aqoonyahannada afafka ee wakaaladdayada ayaa tan u samayn kara dhammaystirnaan, maxaa yeelay waxay diiradda saareen aagagga maadada oo badanaa waxay qoreen waraaqo cilmiyeed
Qoraalka ghost ee luqadaha
Qorayaashayagu waxay ku leeyihiin khibrad sannado badan cilmiga luqadaha waxayna horeba ugu qoreen waraaqo badan aaggan. Cilmigaaga Shaqada guriga, shahaadada Masterka, Qoraalka PhD ama waxaad noogu soo qori kartaa qoraalkaaga. Kama baran kartid aqoonta qoraayaashayada toddobaadyo gudahood. Qorayaashayada ruug-caddaaga ahi waxay kaa caawin karaan warqad erey bixin ah, warqad aqoon-isweydaarsi ah, shahaadada bachelor-ka, shahaadada mastarka, shahaadada diblooma ama tacliinta sare ee qiime jaban. Qiimaheena hoose ee ghostwriting wuxuu ku siinayaa xorriyadda mashaariicdaada kale ama imtixaannadaada inta lagu guda jiro waxbarashadaada.
Luuqadaha cilmi baarista
Haddii aad si guul leh u dhammaysato koorsada barashada luqadda, tusaale ahaan, waad bilaabi kartaa shahaadadaada iyo wixii la mid ah sayniska. Xirfadaha sayniska ayaa runtii ah hab aad u xiiso badan oo lagu sahamin karo mowduucyo cusub.
Luuqadaha nolosha xirfadeed
Luuqad ahaan, waxaad si xirfad leh ugu shaqeyn kartaa tifaftire, turjubaan iyo turjubaan waxaadna ku biirin kartaa xirfadahaaga shirkadda. Wax ka samee! Waan kaa caawin doonaa erfolg keen!
Luuqadaha shirkadaha ganacsiga
Luuqadlayaashu sidoo kale way geli karaan ganacsi waxayna ku biirin karaan xirfadahooda shirkada. Luuqadaha sidoo kale waa loo baahan yahay ee horumarinta software. Kaliya qaado Kontakt anaga. Waxaan kuu xallinaynaa dhibaatada adiga!
Hubinta tayada ee barashada luuqadaha